Portable USB စတစ် Software သုံးပြီးတော့ Portable USB စတစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့် Softwar များအင်စတောသွင်းခြင်း - .::just for share::.
Home » နည်းပညာ » Portable USB စတစ် Software သုံးပြီးတော့ Portable USB စတစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့် Softwar များအင်စတောသွင်းခြင်း
Portable USB စတစ် Software သုံးပြီးတော့ Portable USB စတစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းနှင့် Softwar များအင်စတောသွင်းခြင်း
ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် တင်ပေးထားတဲ့ Portable Stick Softwrae ကို သုံးပြီး Portable USB စတစ် တစ်ခုဖြစ်အောင် ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း ဖန်တီးမယ်ဗျာ...လေ့လာရလွယ်အောင် Screen Capture ရိုက်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...ကဲလေ့လာကြရအောင်...စမယ်..ပထမဆုံး Memoary စတစ် တစ်ခုတော့လိုအပ်ပါတယ်... 2G ဆိုလဲရတယ်...Software မရှိပါက ဒီမှာ ( Portable Stick Softwrae ) သွားဒေါင်းလိုက်ပါ...ကဲရပြီးဆိုရင်ကိုယ့် စတစ်ကို format ချလဲရတယ်..format မချလဲရတယ်...ကျွန်တော်ကတော့ Format ချထားပါတယ်...ဖိုင်တွေရှုပ်နေမှာစိုးလို့....ကဲပြီးရင် ကိုဒေါင်းထားတဲ့ Software ဆီကိုသွားပြီးတော့ click နှစ်ချက်နှိပ်လိုက် တာနဲ့
ဒီလိုပုံလေးပေါ်လာရင် OK ပေါ့....ပြီးရင်
I Agree ပေါ့.....အဲ့ဒါပြီးရင်တော့....
Browse...ပေါ်လာရင် Browse ကိုတစ်ချတ်နှိပ်...ပြီးရင် လိုချင်တာကိုရွေး...ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော့စတစ်ဖြစ်တဲ့ PORTABLE(M:) ကိုဘဲရွေးတယ်...ပြီးရင်တော့ OK ပေါ့....
မျှားပြထားတဲ့အတိုင်း ပေါ်နေမှာပါ...ပြီးရင်တော့ Install ပေါ့....
Finish ပေါ့....အဲ့ဒါပြီးသွားတာနဲ့.....ခုဏတုန်းက ကိုယ် Install လုပ်ထားတဲ့ Memoary စတစ်ဆီကိုသွားလိုက်ပါ...
အဲ့လိုပုံလေးပေါ်နေမှာပါ....အဲ့ဒါဆို မျှားပြထားတဲ့အတိုင်း နှိပ်လိုက် ရင်....
ကိုယ်လိုချင်တာကို အမှတ်ခြစ်ပေးပြီးတော့... Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ....
အဲ့ဒီလိုမျိုးအင်စတောစလုပ်နေပါပြီး.....အဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာက I Agree တောင်းလာရင်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ....အဲ့ဒါအားလုံးအင်စတောလုပ်ပြီးရင်တော့ပြီးပြီပေါ့.....အဲ့ဒါမှမကျေနပ်လို့ ထပ်လိုချင်သေးတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီမှာ အဲ့ဒီမှာ သွားရှာပြီးဒေါင်းကြပါခင်ဗျာ....အားလုံအဆင်ပြေကြပါစေ......
zaw htat November 1, 2013 at 7:34 PM
ကို ဖြိုး November 2, 2013 at 9:33 AM
U don't need to recommand to me >>> credit refer
knowledge is free :)